चीनमा के गर्दैछन् प्रचण्ड ? «
चीनमा के गर्दैछन् प्रचण्ड ?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १६:२३
चार दिने चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आज दिउँसो चिनियाँ क्रान्तिका ऐतिहासिक स्थलहरुको अवलोकन गरेका छन् ।
अध्यक्षले सन् १९४२ मे मा सम्पन्न ऐतिहासिक येनान साहित्यिक गोष्ठी स्थल, येनानमा सन् १९३८ देखि सन् १९४५ सम्म रहेका माओले पहाड खोलेर बनाइएको घर, माओले प्रयोग गरेका कोठा, पुस्तक, टेबुल, पत्रपत्रिका आदि समेत अवलोकन गरे । उनीसँगै स्थानीय उपमेयर, पार्टीका नेताहरु र जनमुक्ति सेना पोशाक लगाएर अध्यक्ष प्रचण्डको स्थागत गर्दै अवलोकनमा सहभागी थिए ।
अवलोकनको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनताले चिनियाँ क्रान्तिमा महत्वपूर्ण स्थान राख्न सफल ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण गरेर विश्वभरीकै मुक्तिकामी जनताको निम्ति क्रान्तिलाई अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण सामाग्री प्रदान गर्ने काम गरेको बताए । उनले अवलोकन गरिएका स्थलहरुका बारेमा पुस्तकमा पढेको, तर अहिले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा खुसी लागेको बताएको खबर नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
अवलोकनकै क्रममा यो समय नेपालको विकास गर्ने समय रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । यो बेला नेपालको विकास गर्ने बेला हो ।’ उनले भने, ‘चीन र नेपालबीचमा चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने ‘टे«ड एण्ड ट्रान्जिट’ सम्झौता भएको छ । यो नेपाल र चीनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ ।’